Omenala ụlọọrụ | Jiangsu Shuangyang Medical Instrument Co., Ltd.
Ọdịbendị ụlọ ọrụ bụ uche anyị, ọchịchọ na nchụso anyị. Ọ na-egosi mmụọ pụrụ iche anyị nwere. Ka ọ dị ugbu a, dị ka akụkụ dị mkpa nke ime ka asọmpi nke ụlọ ọrụ na-aga n'ihu, ọ nwere ike ime ka njikọta otu na ịkwalite ihe okike ndị ọrụ.
Usoro ndị mmadụ
Ndị ọrụ niile, gụnyere ndị njikwa ụlọ ọrụ, bụ akụ kachasị baa uru nke ụlọ ọrụ anyị. Ọ bụ ịrụsi ọrụ ike ha na mbọ ha mere Shuangyang ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ nke ọnụ ọgụgụ a. Na Shuangyang, anyị chọrọ ọ bụghị naanị ndị ndu pụrụ iche, kamakwa ndị nwere ikike na-arụsi ọrụ ike nwere ike ịmepụta uru na ụkpụrụ maka anyị, ma raara onwe ha nye ịzụlite ọnụ. Ndị njikwa n'ọkwa niile kwesịrị ịbụ ndị na-egwu egwuregwu oge niile iji were ndị ọrụ tozuru etozu. Anyi choro otutu aka ike, nwee oke ochicho, ma na oru oru iji mee ka oganihu anyi di n’ihu. Ya mere, anyi kwesiri inyere ndi oru nwere ikike na iguzosi ike n’ezi ihe aka ichota onodu kwesiri ekwesi ma jiri ikike ha mee ihe.
Anyị na-agba ndị ọrụ anyị ume mgbe niile ka ha hụ ndị ezinụlọ ha n'anya ma hụ ụlọ ọrụ ahụ n'anya, ma wepụ ya na obere ihe. Anyị na-akwado na a ga-arụ ọrụ taa, ndị ọrụ kwesiri ịrụ ọrụ nke ọma iji ruo ebumnuche ha kwa ụbọchị iji wee nweta mmeri maka ndị ọrụ na ụlọ ọrụ.
Anyị ewepụtala usoro ọdịmma ndị ọrụ iji lekọta onye ọrụ ọ bụla na ezinụlọ ya ka ezinụlọ niile nwee ike ịkwado anyị.
Ime ihe n'eziokwu na ịtụkwasị obi bụ amụma kachasị mma. Ruo ọtụtụ afọ, "iguzosi ike n'ezi ihe" bụ otu n'ime ụkpụrụ ndị bụ isi na Shuangyang. Anyị na-arụ ọrụ na iguzosi ike n'ezi ihe ka anyị wee nwee ike nweta mbak ahịa na "ịkwụwa aka ọtọ" ma merie ndị ahịa na "ịtụkwasị obi". Anyị na-ejigide iguzosi ike n'ezi ihe anyị mgbe anyị na ndị ahịa, ọha mmadụ, ndị gọọmentị na ndị ọrụ na-emekọrịta ihe, usoro a aghọwo ihe dị mkpa na-enweghị atụ na Shuangyang.
Iguzosi ike n'ezi ihe bụ ụkpụrụ dị mkpa kwa ụbọchị, ọdịdị ya dịkwa na ibu ọrụ. Na Shuangyang, anyị na-elebara anya dị ka ndụ nke ụlọ ọrụ, ma were usoro dabara adaba. Ruo ihe karịrị afọ iri, ndị ọrụ anyị na-akwụsi ike ma na-arụsi ọrụ ike ma raara onwe anyị nye "iguzosi ike n'ezi ihe" n'echiche nke ibu ọrụ na ozi. Thelọ ọrụ ahụ meriri aha ndị dị ka "Enterprise of Integrity" na "Pụrụ iche Enterprise of Integrity" nyere site na mpaghara ógbè ọtụtụ ugboro.
Anyị na-ele anya ịtọlite ​​usoro nkwado kwenyere ma nweta ọnọdụ mmeri-mmeri na ndị mmekọ kwenyere na iguzosi ike n'ezi ihe.
Na Shuangyang, ihe ohuru bu ebumnuche ebumnuche nke mmepe, yana uzo di nma iji meziwanye asọmpi ụlọ ọrụ.
Anyị na-anwa ịmepụta gburugburu ebe obibi na-ewu ewu, na-ewu usoro ihe ọhụụ, na-azụlite echiche dị iche iche ma na-akwalite ịnụ ọkụ n'obi ọhụrụ. Anyị na-anwa ime ka ọdịnaya dị ọhụrụ dị ka ngwaahịa dị ọhụrụ iji gboo mkpa ahịa na njikwa na-agbanwe agbanwe iji wetara ndị ahịa anyị na ụlọ ọrụ ahụ uru. A na-agba ndị ọrụ niile ume ka ha sonye na ihe ọhụụ. Ndị ndu na ndị njikwa kwesịrị ịnwa ịgbanwe usoro njikwa ụlọ ọrụ, ndị isi ọrụ kwesịrị iweta mgbanwe na ọrụ ha. Innovation kwesiri ibu okwu banyere onye obula. Anyị na-anwa ịgbatị ọwa ọhụrụ. E meziwanyela usoro nkwukọrịta dị n'ime ya iji kwalite nkwukọrịta dị mma iji kpalite mmụba. A na - emewanyewanye ihe ọmụma site na ọmụmụ ihe na nkwukọrịta iji meziwanye ikike ọhụụ.
Ihe na-agbanwe mgbe niile. N'ọdịnihu, Shuangyang ga-emejuputa ma chịkwaa ọhụụ n'ụzọ dị irè n'akụkụ atọ, ya bụ atụmatụ ụlọ ọrụ, usoro nhazi na njikwa kwa ụbọchị, iji zụlite "ikuku" dị mma maka ihe ọhụụ ma zụlite "mmụọ nke ihe ọhụụ" ebighi ebi.
Ilu ahụ kwuru na "na-enweghị ntụkwasị obi n'okporo ụzọ pere mpe na nke anaghị ahụ anya, a gaghị eru ọtụtụ puku kilomita." Ya mere, iji wee mata ntinye aka anyị kacha mma, anyị kwesiri ịga n'ihu n'ichepụta ihe n'ụzọ dị ala, ma rube isi n'echiche bụ na "ngwaahịa na-eme ka ụlọ ọrụ pụta ìhè, ọtụmọkpọ na-emekwa ka mmadụ nwee ọpụrụiche".
Chụso ihe kacha mma pụtara na anyị kwesịrị ịhazi akara ngosi. Ma anyị ka nwere nnukwu ụzọ iji gaa ịghọta ọhụụ nke "pụtara ìhè maka ụmụ China". Ebumnuche anyị wuo nke kacha mma na mba pụrụ iche. Na iri afọ na-abịanụ, anyị ga-ebelata ọdịiche dị n'etiti ụdị mba ụwa ma gbalịa ịchụso ngwa ngwa.
Njem nke otu puku kilomita ga-amalite site na otu nzọụkwụ. Gbaso uru nke "nghazi ndị mmadụ", anyị ga-akpọkọta ndị ọrụ nwere akọ, ndị na-anọgidesi ike, ndị bara uru na ndị ọrụ aka ọrụ iji mụta ịdị uchu, jiri obi ike na-eme ihe ọhụrụ, ma na-enye onyinye nke ọma. Anyị ga-elekwasị anya n'ịdị mma ma jigide iguzosi ike n'ezi ihe mgbe anyị na-agbasi mbọ ike maka ịdị mma nke onye ọ bụla na nke ụlọ ọrụ iji mezuo nnukwu nrọ nke ime ka Shuangyang bụrụ akara mba ama ama.